मृगौला हाम्रो शरीरको लागि अत्यधिक महत्वपूर्ण अंग हो । यसले शरीरको सफाईमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ । यसले आवश्यक मात्रामा काम गर्न छाड्यो भने तपाईंको शरीर रोगको घर बन्नेछ ।
मृगौलाले शरीरमा रहेका विजातीय पदार्थलाई बाहिर निकालेर रगतको सफाई गर्दछ र शरीरलाई आवश्यक हुने खनिज तत्व र अम्लीय पदार्थलाई बचाई राख्दछ । यहाँ हामीले ध्यान नदिँदा मृगौला बिग्रन सक्ने केही आनीबानीको बारेमा चर्चा गरिनेछ–
यदि तपाई पानी कम पिउनुहुन्छ भने रगतको सफाई गर्नको लागि मृगौलालाई आवश्यक पर्ने तरल पदार्थको अभाव हुन्छ र रगतमा हुने फोहोर पदार्थ तपाईंकै शरीरमा रहन्छ । यो अवस्था सृजना हुनु मृगौलाको लागि एकदमै खराब अवस्था हो ।
यदि तपाई नियमितरुपमा पिसाब रोक्ने गर्नुभएको छ भने यस्तो बानी तपाईंको मृगौलाको लागि हानिकारक हुन्छ । यस्तो अवस्थामा किड्नीमा पत्थरी हुने सम्भावना बढ्छ । यसले मृगौलालाई एकदमै नोक्सान पुग्दछ । यसकारण, पिसाब लागेको बेला कहिल्यै नरोक्नुहोस् ।
३. बढी नुन खानु
शरीरले सहीढंगले काम गर्न शरीरमा नुनको मात्रा हुनु एकदमै जरुरी छ । यदि हामी फलफूल र सागसब्जी नियमित खान्छौं भने हामीले शरीरको लागि आवश्यक नुन वा सोडियम पर्याप्त मात्रा प्राप्त हुन्छ । यसो हुँदाहुँदै पनि हामी थप नुन भोजनमा खाने गर्दछौं । अत्यधिक मात्रामा नुनले हाम्रो शरीरको रक्तचाप बढाउँछ र मृगौलामा अतिरिक्त दबाव दिन्छ । दिनमा ५ ग्रामभन्दा बढी सोडियम वा नुन खानु हुँदैन ।
४. चिसो पेय पदार्थ
यदि तपाई चिसो पेय पदार्थ पिउनुहुन्छ भने तपाईंले यो बानी त्याग्नुपर्दछ । किनकी यो स्वास्थ्यका लागि असाध्यै हानिकारक हुन्छ । अत्यधिक कोल्ड ड्रिंक्स पिउनाले शरीरको प्रोटिन पिसाबको माध्यमबाट बाहिर निस्कन्छ । यसको सिधा अर्थ हो तपाईंको मृगौलाले काम गर्न छाडिसक्यो र यो ध्वस्त भइसकेको छ ।
५. पर्याप्त मात्रामा नसुत्नु
जब तपाईं सुत्नुहुन्छ त्यतिबेला तपाईंको मृगौलाको तन्तुहरुको नवनिर्माण भइरहेको हुन्छ । यसर्थ पनि तपाईले पूरा निन्द्रा सुत्नुपर्छ । यदि तपाई राम्रोसँग सुत्नुभएन भने यसले मृगौलालाई सिधै असर गर्दछ र यसमाथि दबाव बढ्दछ ।
मासु खानाले तपाईंको मृगौलाको मेटाबोलिज्ममाथि अधिक दबाव पर्दछ । यदि तपाईं आफ्नो खानामा अधिक प्रोटिन लिनुहुन्छ भने यसको सीधा अर्थ हो तपाईंको मृगौलाले काम कम गर्दछ । यसबाट भविष्यमा तपाईंले ठूलो मूल्य चुक्ता गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।
७. मादक पदार्थ सेवन
अत्यधिक मात्रामा र नियमित रक्सी सेवनले तपाईको कलेजो र मृगौला दुवैमा एकदमै नराम्रो असर गर्दछ ।
८. भोजनमा मिनरल्स र भिटामिनको कमी
भोजनमा ताजा फलफूल, सागसब्जी समावेश गर्नुपर्दछ । यस्तो भोजन पूरै शरीरको लागि महत्वपूर्ण हुन्छ । किड्नी फेल हुने र पत्थरी हुने अधिक सम्भावना त्यतिबेला हुन्छ जब हाम्रो भोजनमा मिनरल्स तथा भिटामिनको मात्रा कमी हुन्छ । मृगौलालाई खतराबाट जोगाउन म्याग्नेसियम र भिटामिन-६ अत्यधिक महत्वपूर्ण हुन्छ ।